IsithethiMaker ye-iOS | Plum emangalisayo
Asanda: 10 / 24 / 18
“Inkqubo yeSpeechMaker enexabiso eliphantsi inceda abasebenzisi ukwenza, ukujonga, ukuziqhelanisa, ukurekhoda kunye neentetho zexesha. Kubandakanya ingqokelela enkulu yeentetho ezidumileyo, kodwa okona kubaluleke kakhulu, izixhobo zokwenza kunye nokuzisa ezakho ngendlela efanelekileyo. - UGraham K. Rodgers, uphononongo kwii-eXtensions, 8/30/17
Yenza, Ziqhelise, Yiva, Gcina indawo yogcino kwaye unike iiNtetho -Speechmaker yisoftware yokwenza i-iPhone yakho / i-iPad okanye isixhobo se-Android kwifowuni yeselfowuni, incwadi yokubhalela, indawo yokugcina yeentetho kunye ne-teleprompter yobungcali yokuthetha esidlangalaleni.
Ukuhlolwa kwakhona kwe-eXtensions nguGraham K. Rodgers 8/30/17
* Ibukelwe kwi-CNN nakwi-App yeMfundo ePhakamileyo ka-2013 *
Khuphela kwindawo yokugcina iApple iTunes App.
Ukongeza kwintetho inokusetyenziswa ukubamba kunye nokufunda imibongo, iingoma, izikripthi, umdlalo ohlekisayo, izinkulumo, iintshumayelo kunye / okanye imidlalo.
Jonga uphononongo lwevidiyo apha Umboniso wemihla ngemihla woSetyenziso
Ngoku unokuziqhelanisa kwaye uve ukuba uvakala njani ngaphambi kokuba unike intetho ebaluleke okanye unike imigca kumdlalo okanye ufunde umbongo okanye unike intetho. Fumana imvakalelo yokuqaqamba kunye nokuhamba kwentetho yakho.
Incwadi yezandla / Uncedo
I-SpeMM ithandwa kakhulu ngabafundi, ootitshala, abezopolitiko, iimbongi, abafundisi, ababhali, ababhali, ababhali, ababhali, ababhali, ababhali, abahlekisi, iimvumi kunye nabadlali. I-SpeMM inika zonke iintlobo zee-orators yonke into efunekayo ukudala, ukuziqhelanisa, ukuva kunye nokunika iintetho.
Inokugcina amawaka eentetho ezinolwazi olongezelelweyo njengesihloko, umbhali, umhla kunye nokurekhodwa kweaudiyo. I-SpeMM iza kunye neentetho ezininzi ezidumileyo ezakhelwe ngaphakathi.
Gcina zonke iintetho ezilungileyo embalini. Funda kwiinkosi.
Yenza intetho yakho okanye ungenise njengombhalo, i-RTF okanye i-PDF usebenzisa i-Dropbox okanye iGoogle Amaphepha.
Guqula isicatshulwa ukuba sithethelwe ngaphandle sisebenzisa iSiri kwiilwimi ezingama-36 ezahlukeneyo. Fumana ngokukhawuleza incasa yendlela intetho yakho evakala ngayo.
Qhelisela intetho yakho kwaye urekhode umsindo. Mamela ukurekhoda njengempendulo yokuphucula intetho, ixesha kunye nokusebenza.
Ziqhelise ukuhambisa imigca yakho ngaphandle kwamathandabuzo, sebenzisa isipili kunye ne-SpeechMaker.
Nika intetho yakho usebenzisa ukuzihlaziya ngokulula. Ngokucacileyo bona le ntetho inyibilika kukhetho lwakho lwefonti, ubungakanani kunye nembala engasemva. Bona ixesha, ixesha kunye nexesha lokuya kule ntetho ngokuthe gabalala.
Ukugcina intetho yakho njengombhalo kunye nesandi sokukunceda uqhubeke uphucula. Oovimba ngeenjongo zembali.
Yabelana nawe ngentetho nabahlobo, osebenza nabo kunye ne-Facebook.
IsithethiMaker sinamandla ngakumbi emva koko zibiza kakhulu iifowuni.
Iimpawu zeeNtetho zeNtetho
Uhlelo lokusebenza oluhle lokufundisa ngokuthetha esidlangalaleni kunye negrama.
Ibaleka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android.
Imifanekiso emihle ye-UI kunye negrafu ye-7 XNUMX.
Ngenisa isicatshulwa, i-rtf, kunye ne-pdf ngeDropBox, iGoogle Drayivu, kunye neKopi kunye nokuncamathisela kunye nokwabelana ngefayile ye-iTunes.
Isicatshulwa sentetho ethunyelwa ngaphandle nge-imeyile.
Ngenisa kunye nokuthumela i-audio ngeDropbox.
Ukurekhodwa komsindo kukuvumela ukuba ufumane ingxelo njengoko ufunda intetho yakho.
Njengomnxibelelanisi wefowuni olawula ngokuzenzekelayo intetho yakho kwisantya esifanelekileyo.
Yiva isixhobo esikrelekrele sithetha ngokuvakalayo intetho njengoko iskrola kwaye iphakamisa umgca ngamnye.
Khetha kulwimi olunye kwiilwimi ezingama-36 kunye namazwi eSiri.
Ngokucofa iqhosha ubone izenzi, izibizo, izichazi kunye nezinye iindawo zentetho eziqaqanjiswe ngemibala eyahlukeneyo.
Lawula ukujongwa koxwebhu ngokutshintsha, umbala ongasemva, iifonti, isantya sokuhamba, ubungakanani befonti.
Amaqhosha kunye nezimbo zomzimba zokuqalisa, ukumisa nokulawula isantya sokushukuma.
Ukucofa okanye ukusondeza ukutshintsha ubungakanani befonti
bamba uze uqhubeke kwangoko kuyo nayiphi na intetho
cofa icala lasekunene ukuze uskrole ngokukhawuleza. cofa icala lasekhohlo ukucola kancinci.
Ngexesha lokujonga ixesha leentetho, lidlulile, lixesha, kuqikelelwa ixesha.
Umboniso kwi-AppleTV eqhagamshelwe ngababeki be-HD kwizikhululo zeTV, i studio, iiholovolo, iipodcasters, iiholo zokufunda kunye nemidlalo.
Funda, lungisa, unike, dlala kwaye urekhode iintetho nangaliphi na ixesha naphi na. Akukho sidingo sokuxhomekeka kumanqaku ama-napkins okanye amakhadi e-index.
Gcina iintetho zakho kunye nawe ngalo lonke ixesha, zikhuselekile kwaye ziyafumaneka ukuba zisetyenziswe nangaliphi na ixesha. Guqula ngokulula kwaye unike iintetho ngomzuzu wokugqibela.
“Ukuphatha zonke iintetho zam ngesixhobo esinye esisebenzisekayo nesisebenziseka lula kusindisa ingqondo yam. I-SpeechMaker kulula ukuba ndiyisebenzise kwaye ndiyayithanda indlela endinokulawula ngayo yonke imiba yendlela ejongeka ngayo kwiscreen. Phambi kokuba ndibuze umfazi wam ukuba le ntetho ivakala njani, ngoku ndiyirekhoda intetho de ndiyifumane kanye emva koko ndibuze umfazi wam ukuba ucinga ntoni. I-SpeechMaker yeyona nto inokwenzeka ukuba yenzeke kobu bugcisa bamandulo kwisithuba seminyaka elikhulu. ”
Ngaphezulu ngasekhohlo kuseto lweSiri yelizwi, iphimbo, ivolumu kunye nesantya. Ekunene ngendlela yokuqaqambisa iinxalenye zentetho.
IiLwimi zamanye amazwe
Ixhasa zonke iilwimi, ekunene nasekhohlo nasekunene nakubantu abakhethekileyo.
Kulula ukujonga ixesha libonisa umgca, ixesha elidlulileyo, ixesha eliqikelelweyo kunye nexesha eliseleyo.
Yiya nakweliphi na icandelo lentetho.
Guqula ubungakanani befonti ngoko nangoko kwi Indlela ebukhoma okanye yokuHlela.
Hlela isicatshulwa sentetho kunye notshintsho lwefonti, ubungakanani, njl.
Iza kunye neentetho ezidumileyo. Yongeza kwindawo yokugcina iintetho zakho.
Isoftware ibala ezantsi ngamanani kunye nemibala kude kuqalise.
Iyafumaneka kwi-iPhone / iPad kunye ne-Android
IsithethiMaker sinje ngepodium yeselula. Umnxibelelanisi wefowuni ngayo yonke intetho yakho.
Lawula umqulu oluzenzekelayo kunye nempompo ukukhawulezisa isantya okanye isantya.
Dlala iintetho ezidumileyo okanye urekhode eyakho.
Sebenzisa i-SIRI ukuva intetho kumthamo oguqukayo, isandi kunye nesantya kwiilwimi ezingama-36.
Guqula ifonti yentetho kwindlela yokuhlela.
Kutheni usebenzisa iTeleprompter?
Umnxeba wefowuni uvumela nabani na ukuba abonakale njenge-anchor yeendaba. Yenzelwe ukuvumela i-anchor, italente kunye okanye umongameli ukuba ajonge ngqo kwikhamera, afunde isicatshulwa sokukrola kwaye aqhagamshele abaphulaphuli. Apha ngezantsi kukho imbonakalo yanamhlanje ye-teleprompter. Ukuba ne-teleprompter kumacala amabini kuvumela umongameli ukuba ayibone intetho kwaye enze unxibelelwano lwamehlo kunye nabantu phambi kwakhe kumacala omabini.
Uyazi kwangoko ividiyo engenabuchule xa ubona umntu ejonge kwicala lekhamera, kubonakala ingengokwendalo. Abathethi ngqo nawe. Ayithathi ingqalelo yakho njengokujonga ngamehlo athile.
Uyazi xa umntu esithi 'yenziwe ngezibuko ”babhekisa kuhlobo oluthile lomlingo. I-Teleprompters ngumlingo osekwe kwisipili sendlela enye njengakwimiboniso yolwaphulo-mthetho. Kule meko ikhamera iyadubula ngendlela enye kwicala elinye kwelinye icala isicatshulwa siyabonakala kumfundi.
Thatha iintetho zakho ziye kwinqanaba elilandelayo. Lo mzekelo usebenzisa nje i-SIRI…
Iifowuni ezenziwa ngomnxeba zazibiza kakhulu kwaye zininzi kakhulu. Inkulumbuso inamawaka eedola kwaye uninzi lwayo luyi- $ 500 + kwaye ubukhulu becala isibuko sayo yindlela enye.
Ngethamsanqa, ngoku, zininzi IIPOTO 'zenzele ngokwakho' iiprojekthi phaya ezinje lo ukwenza i-Hardware kunye ne-SpeechMaker evumela nabani na ukuba abenayo i-teleprompter yobuqu elula, engabizi kakhulu kwaye ingcono kunayo nayiphi na into eyayikho ngaphambili.
Nokuba luckier ngoku kukho ii-iPhones, ii-iPads, i-Android kunye nezinye iitafile ezikuvumela ukuba uziphathe kwaye usebenzise i-SpeechMaker njenge software yakho ye-teleprompter yabucala naphi na naphi na.
Iingcebiso zokuTyalela umnxeba kwiTelepompter evela kwii-ToastMasters
Ukuphatha i-teleprompter kunqabile ukuba kube lula njengoko kujongeka, kwaye kulula ukujongeka ngathi unesitayile okanye ukungabi naluthando ngaphandle kokusebenzisa ubuchule obufanelekileyo. Umqeqeshi-weenkcazo-ntetho Umqeqeshi uLaurie Brown ubonelela ngezi ngcebiso ukusebenzisa ngobuchule umnxibelelanisi wefowuni:
Khokela isantya sesikhuthazo. Isantya sakho sokufunda kufuneka silawule isantya sokushukuma. Ukuba opharetha wesongoza uyakhokela, yima kancinci ukuze ubavumele ukuba bacothise okanye bakhawuleze.
Sukususa intloko yakho ukusuka kwelinye icala njengoko ufunda. Ukuba uzibona usenza le nto, ubukhulu becala ubungakanani befonti yesikripthi kwisiphutha asilungile kwaye izivakalisi zide kakhulu.
Thetha ngokwemvelo. Sukufunda nje umxholo wokukrola. Yongeza izinto ezincinci eziphazamisayo okanye i-ad-libs apho ivakalelwa khona yindalo, kwaye wazise umqhubi wakho kwangaphambi kwexesha ukuba uza kwenza njalo. Ukuba ufuna ukusebenzisa amabali obuqu, baxelele kwimemori-musa ukuzifunda izenzi ezikwiiscript. anchorman1.jpg
Jonga ujongano lweliso kwiliso. Qiniseka ukuba ufunda kwiziko lesikrini. Ukuba ufunda uphakame kakhulu, ingakwenza ukuba ubonakale uzithoba kubaphulaphuli, impumlo yakho iphakame emoyeni. Ukuba ufunda usezantsi kakhulu okanye ujonge ezantsi, unokukwenza ubonakale unomsindo.
Sukujonga. Ukuphefumla kunye nokucofa ngokwendalo. Ungoyiki ukujonga kude kunesikhuselo ngamanye amaxesha- kuyanceda ukubukeka ngathi ucinga endaweni yokufunda.
Jonga umnxibelelanisi wefowuni njengomntu. Khawube nomfanekiso ngqondweni womntu omthanda ngokwenyani emva kwamagama.Lonto inokukunceda wenze igama lakho kunye nembonakalo yobuso.
Sebenza ngokuthula. UBrown uthi: "Ukuhlala kwikhamera kubalulekile, oko akuthethi ukuba ulukhuni okanye awunazimvakalelo, kodwa umzimba wakho ungaphezulu uhleli. Izithethi zinomkhwa wokungena ngaphakathi nangaphandle ukuya kwikhamera, ebonakala ngathi yibhanyabhanya eyi-3-D, utshilo.
Ngaphezu kwako konke, ziqhelanise ngokungqongqo kwaye wenze umxholo ungaphakathi kuwe. Izithethi ezininzi zicinga ukuba zingakwazi ukusebenzisa amandla asishukumisayo ngokuziqhelanisa noko okanye azenzi nto.Ukuzama iphiko ngokufuthi kuthetha intlekele.Ngenxa yoko, qiniseka ukuphinda uzwakalise ukukhwaza, kuba amagama ahlukileyo kwintloko yakho kunoko bakwenzayo xa bethetha.Qhelana nomphathi wakho ukuze okanye yena uyalazi ijubane lakho lokuthetha.
Iingcebiso ezingakumbi zokuThetha esiDlangalaleni
Bhala kwaye usazise iingcebiso zakho ozithandayo.
I-4 I-MEC YOBUGCISA OONOBHALA BENKONZO.
-ngoku unokucima zonke iintetho zembali
-Ukuphuculwa kokujongana komsebenzisi
Umba webhokisi yedrafti yabanye abasebenzisi
-Ukhetho lweSiri lokuthetha ngesithethi okanye ngokufumana kwi-iPhone.
Enkosi. Nceda ugcine iingcebiso ezizayo.
[layisha] umgca wokugqibela womboniso wawugqunywe ngokuyinxenye.
Enkosi ngengxelo enkulu! Nceda ugcine iingcebiso ezizayo.
-rekhoda ividiyo kunye / okanye iaudiyo yentetho yakho, intetho, ingoma, umbongo, umculo, njl.
-Utshintsho lwevidiyo, iinguqu ze-ui ezifihlakeleyo, utshintsho oluninzi lwe-ui
-ukukhangela i-1000 + yedatha yeentetho zehlabathi ezidumileyo ngokukhawuleza kwaye kulula.
-Sebenza nohlobo lwamva lwebhokisi yebhokisi.
-[New] Ukuqhelaniswa nomfanekiso wamacwecwe kuyaxhaswa
- [Ibug] Ngelixa ukutshintsha useto lweTTS zentetho (ii), isantya sothango kunye nokulawulwa kwevolumu bekungabonakali kwezinye izixhobo
- [I-bug] i-TTS ibingasebenzi kwi-Samsung Glaxy Tab 4, 7 "icwecwe kwimeko ka-Google Kwincwadi-ukuya-kwiNtetho.
-rekhoda ividiyo kunye / okanye ividiyo yomculo wakho, intetho, intetho, njl.njl.
-ukukhangela indawo eneenkcukacha ezili-1000 + yeentetho ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa.
-ukufikelela kwebhokisi ye-dro.
-iinguqu ezininzi ngakumbi kunye nokwenza lula.
-ukwazi ngoku ukufunda iifayile zePDF kwi-google drive. Sele ifunda i-PDF's kwi-DropBox
-utshintsho olwenziwe ngezandla
I-1000 + iintetho ezongeziweyo zibandakanya ukukhangela.
-kusebenza ngoku njenge-teleprompter enezinketho ezininzi zobungcali kubandakanya i-bluhlaza, lawula ngenye isixhobo se-ios, isipili, njl.
-ulawulo lweBluetooth lokukrola ukusuka kwesinye isixhobo se-ios.
-Sebenzisa ios ngoku eyakhelwe kumagama entetho
-dityaniswe ne xcode 7.3 yamva nje
-ibhokisi yedrophu emiselweyo
-lunye utshintsho oluninzi
-ingcebiso zakho zibalulekile kuthi. Nceda uthumele ingxelo nge-imeyile.
-oku kusebenza kwi-iPhone kunye ne-iPad
-sebenzisa iiapile ii-apile kwitekisi yentetho kuyo yonke intetho kunye neelwimi ezingama-36.
-lawula ngakumbi ulwaziso lwentetho.
-ihlaziywe kwimizobo entle ye-ios7 kwi-iPhone kunye ne-iPad.
-dityaniswe nekhowudi ye-x yamuva.
-izinto ezininzi ezilungisiweyo.
-uGoogle noqhagamshelo lwebhokisi yedrophu, ukungenisa ngaphakathi kunye nokuhlaziywa.
- iifomathi ze-rtf kunye ne-pdf ngoku ziyaxhaswa.
-ngoku ixhasa imbonakalo yomhlaba kunye nokuboniswa komfanekiso.
-nombulelo kubo bonke abasebenzisi. nceda ugcine iingcebiso ezizayo.
-ngoku bonisa iinxalenye zentetho. iqhosha kwi-GR elungileyo (yegrama) ibonisa izibizo, izenzi, njl njl.
- yongeze ingqikelelo yexesha lelebheli. ixesha = amagama_kubala / 2.72.
-Ukungqubeka kulungiso ngexesha lokuthetha kuyatshintsha
-Iongezwe iiyure kwilizwi lokukhetha ixesha
-Iibhlog ezisisigxina kunye nokujikeleza
-Iwindows intetho eyandisiweyo yokulungisa umbono weempahla ze-speeche
-I-bug esisigxina ngefestile yokunceda
-inokucofa iqhosha 'le-autoscroll' kuphela kwimiphetho. ngoku asenzi.
-irekhodi zokudlala ezirekhodiweyo zilungisiwe
-Imodemu esebenzayo isebenza kunye nokurekhodwa kwemisebenzi yeewindows ngoku azimeleyo komnye nomnye
-minye imiba emincinci
Ukongeza kwiintetho zisebenzise ukubamba, ukuziqhelanisa nokufunda imibongo, iingoma, izikripthi, umdlalo ohlekisayo, iintshumayelo, iintshumayelo, umdlalo, njl.
I-SpeMM ithandwa kakhulu ngabafundi, ootitshala, abezopolitiko, abalawuli, iimbongi, abafundisi, ababhali, ababhali, ababhali, ababhali, ababhali, abahlekisi, iingoma, iimvumi kunye nabadlali. I-SpeMM inika zonke iintlobo zee-orators yonke into efunekayo ukudala, ukuziqhelanisa, ukuva kunye nokunika iintetho.
Bona kwaye uve ukuba uvakale njani ngaphambi kokuhambisa intetho ebaluleke kakhulu usebenzisa irekhodi okanye ividiyo erekhodiweyo. Fumana imvakalelo yokuqaqamba kunye nokuhamba kwentetho, umbongo, intetho, njl.
Khangela amagama aphambili kwaye ufumane iintetho ezakhiweyo kwiziko ledatha lamawaka eentetho ezidumileyo. I-SpeechMaker iza neentetho ezili-1000 + kwaye inokugcina izinto ezininzi ezinokubandakanya ulwazi olongezelelekileyo njengesihloko, umbhali, umhla kunye nokurekhodwa kweaudiyo / ividiyo.
Thenga kanye ukuba usebenze kuzo zombini i-iPhone / i-iPad okanye ifowuni ye-Android / ithebhulethi.
Thenga kube kanye kwaye lonke usapho lwakho lingabelana ngalo usebenzisa iSabelo soSapho sakwa-Apple.
Imifanekiso emihle ye-UI kunye negrafu ye-7 ye-XNUMX kunye ne-Android
Xelela intetho yakho kuSiri ukuba angene ngqo kwi-Speechmaker.
Thetha ngokuvakalayo ukhetho lokusebenzisa amazwi eSiri, isini, ulwimi kwaye kwangaxeshanye ubone umgca ngamnye wentetho uphakanyisiwe njengoko usenza ngokuzenzekelayo.
Ngenisa isicatshulwa, i-rtf, kunye ne-pdf ngeDropBox, iGoogle Drayivu, kwaye Khuphela kunye nokuncamathisela.
Ngenisa kunye nokuthumela iaudio kunye nevidiyo ngeDropbox kunye neGoogle Drayivu
Ukurekhodwa komsindo / ividiyo kukuvumela ukuba ufumane ingxelo njengoko ufunda intetho yakho.
Sebenzisa njenge-teleprompter ukulawula, ukuqhuba ngokuzenzekelayo intetho yakho kunye neprojekthi kwizikrini ezinkulu.
Khetha ulwimi olu-36 olunye kunye nezithethi zeSiri
Ngeqhina leqhosha khangela izenzi, izibizo, izichazi kunye namanye amalungu entetho abonakaliswe kwimibala eyahlukeneyo
Lawula ukujongwa koxwebhu ngokutshintsha, umbala ongasemva, iifonti, isantya sokuhamba, ubungakanani, njl.
Amaqhosha kunye nezimbo zomzimba zokuqalisa, ukumisa nokulawula isantya sokushukuma
+ ucofe icala lasekunene ukuze ukhawuleze ukunyathela. cofa icala lasekhohlo ukucola kancinci
Ukujonga ixesha elikhoyo kwintetho ibonisa ixesha elidlulayo, ixesha eliseleyo kunye nexesha eliqikelelweyo.
Apha ngezantsi kukho umfanekiso weSpeechMaker. Isebenza kwimowudi yomzobo kunye nembonakalo yelizwe kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad. Inokhetho oluphambili lwe-2, ungangena kwiNdlela yokuPhila okanye kwiMowudi yokuHlela.
Indlela yokuPhila yokunika iiNtetho okanye uHlela indlela yokuhlela iintetho. Zonke izinto ezahlukeneyo / useto zinokufumaneka phantsi kwenye okanye enye.
Ezi ntlobo zimbini, Hlela kunye nokuPhila, zizinto eziphambili ekusebenzeni no-SpeechMaker. Uya kufumanisa ukuba utshintsha ubuya umva ngokuthepsa enye okanye enye.
Cofa iqhosha elibukhoma ukunika intetho yokwenyani okanye yokwenza. Kwi-Live Mode jonga amaxesha kwaye ukwazi ukwenza i-Autoscroll, Rekhoda iaudio okanye ividiyo okanye uve intetho ethethwa ngokuvakalayo ngu-Siri.
Cinezela Hlela iqhosha lokuhlela intetho, utshintshe ifonti, ubungakanani, ilizwi, njl njl.
Cofa iqhosha lokuPhila kuxa ufuna ukwenza intetho. Kwibar yokuhambisa esezantsi uya kubona la maqhosha asekhohlo. Isibini sokuqala nguHlelo / ngokuBukhoma. Xa enye ikhutshiwe.
Xa u-Live ekhethiweyo uya kubona la maqhosha kwi-bar ye-bar esezantsi:
Hlela -Eli qhosha alikhethwanga. Ukuthabatha kukusa kwiNdlela yokuHlela. Hlela ivumela ukuhlela zonke iintlobo zeseto selizwi, ifonti, ubungakanani, imvelaphi, njl.
Live -Leli kufuneka libe liqhosha elikhethiweyo ngoku ukuba awukucofisi kukuthatha kwiNdlela yokuPhila. Ukuphila kufana nokubonisa iintloko ekunikeni intetho. Amaxesha phezulu.
Siri -Ukukhetha oku kuqala ngasese ukuqaqambisa imigca yokubhaliweyo kunye nokuthetha ngokuvakalayo intetho ekhethiweyo. USiri uya kubala ukubala ukuqala.
Hlaziya -Imfutshane yokurekhoda ikunika ukhetho lweaudiyo okanye ukurekhodwa kwevidiyo.
I-Autoscroll -Skrola ngokuzenzekelayo intetho ngesantya esithile.
ICEBISO: Guqula isantya sokuhamba ngesandla ngokuthepha naphi na kwicala lasekhohlo kancinci kancinci kwaye kwicala lasekunene ngokukhawuleza.
Kwimowudi ebukhoma 'amaXesha aBukhoma' aya kubonakala kwi-bar bar ephezulu. Ukuqala ngasekhohlo imiboniso yokuqala 'yexesha eliqikelelweyo'. Ngexesha elizayo 'Ixesha elidlulileyo' kunye nasekunene phezulu 'Ixesha eliseleyo'.
Xa ukhetha Hlela imowudi ubona ibha esezantsi ye-nav (ngasentla).
Apho unokukhetha kwakhona uHlelo okanye uBukhoma, uHlelo lweNtetho kunye ne icon ebonakala ngathi yimigca emi-3 ethe tye evula imenyu esecaleni ejongeka ngoluhlobo (ngezantsi) kwaye ivumela ukukhetha iiNtetho, iSiri, ukuRekhoda, ukuPrinta, kunye noNcedo.
Iqhosha eliphakathi liqhosha leNtetho yokuHlela elilungisa intetho oyikhethileyo okwangoku. Ukwenza intetho entsha khetha iintetho kwisilayidi kwiphaneli engezantsi. Olunye ukhetho lokufaka intetho entsha okanye ukuhlela kunye nendala kukuyalela kwi-SpeechMaker usebenzisa iSiri ngokushaya iqhosha lemakrofoni ecaleni kwendawo yesithuba kwikhibhodi ebonakalayo.
Amaqhosha amabini amatsha asuka ekhohlo i-icon ekhangeleka ngathi iilayini ezi-3 ezithe tye zivula imenyu esecaleni ekhangeleka ngathi.
Ezi-5 zixutyushwa ngezantsi.
Iphaneli yeeNtetho (ngezantsi) iyafumaneka kwiNkqubo yokuHlela. Apha unokukhetha intetho ngompu, yenza, ungenise, ukhuphele kunye nokucima intetho. Yila, Ngenisa, Thumela ngaphandle kunye nokucima kuxoxwa ngaphezulu ngezantsi.
dala -Ikuvumela ukuba wenze intetho yakho. Khumbula ukuba ungabetha iqhosha lokuyalela ngasekhohlo kwebhodibhodi.
Ngenisa -Iintetho ezivela kuGoogle okanye kwibhokisi yedrophu. Iifayile ezi-4 zingeniswa ngaphakathi, isicatshulwa, i-RTF, iPDF kunye ne-HTML.
isabelo - nge-imeyile okanye kuFacebook. Ukuba ufuna ngaphezulu sazise.
Susa - khetha ucofe ukucima intetho.
Ngasekunene kwentetho nganye (ngasentla) cofa kwi-blue (i) iqhosha ngasekunene kwesihloko ngasinye ukuze ubone incoko yababini engezantsi evumela ukuhlela umbhali, isithethi, indawo, umhla kunye neenkcukacha zexesha (ngezantsi).
Khetha iqhosha eliluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngasekunene koMhla / ixesha, ubude bexesha okanye iSiri ukutshintsha useto lwezo.
Khetha iqhosha eliluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngasekunene kwe-SIRI ukubona incoko yababini engezantsi ukutshintsha ulwimi, isantya, isandi kunye nevolumu. Olu seto lunokwenziwa kwintetho enye okanye okungagqibekanga kuzo zonke iintetho ngokumisela iqhosha 'lokuNgagqibekanga kubo bonke'.
Khetha iblue (i) iqhosha ukuya ngasekunene kwe-SIRI ukuhlela useto lweXesha kunye noMhla ngendlela efanayo.
I-Siri inokumiselwa ukuba ithethe umntu ngamnye kule dialog ingasentla kodwa inokubizwa ukuba ibe yintetho esuka kwisilayidi kwimenyu nayo.
Ngenisa I-audio kwi-mp3 okanye kwifomathi yefc.
Ukuthumela ngaphandle irekhodi lakho lokurekhoda i-imeyile khetha iaudio kwaye ucofe iqhosha lokuthumela ngaphandle.
Ingxelo yeRekh okanye yeRekhodi kwimbonakalo ebukhoma iya kwenza ukubala ukuya emva koko iqale i-autoscroll kwaye iya kurekhoda umsindo. Xa ucofa uyeke iya kuyigcina ifayile kwaye uyibeke kwincoko yababini ye-Soundwave oza kuyidlala, uyithumele ngaphandle okanye uyicime.
Cofa kwiqhosha lokurekhoda ukuqalisa ukurekhoda kunye ne-autoscroll ngaxeshanye. Iintetho zinesihloko:
Oku kumela umhla kunye nexesha lokuqala kokurekhoda. Ulwandiso .caf luhlobo lwefayile yesandi seapile.
Useto lwe-teleprompter slide ukusuka ngasekhohlo kwaye uvumele:
Tye-zibonise isicatshulwa ngokuthe tye.
Eme nkqo-zizipili ezibhaliweyo ngokuthe nkqo.
Ukutshintsha umbala oqaqambileyo-lowo ngumbala oqaqambileyo wombhalo ngexesha lokujikeleza ngokuzenzekelayo kwiMowudi ebukhoma.
Kwimbono ye-Live ukuba ucofe iqhosha le-Autoscroll intetho iya kuqalisa ukukhangela kwisantya osikhethileyo. Ukunyusa itephu yesantya ngasekunene. Ukucutha itephu yesantya kwicala lasekhohlo lesikrini. Le icon iya kuvela kwiscreen ukukunika isantya sokuphendula.
Kwi 'Hlela Imowudi' ubona imenyu esecaleni ibonwa ngasekunene. Le menyu inokuhanjiswa phezulu okanye ezantsi ngokutsala phezulu kunye nezantsi iintolo.
Iqhosha ngalinye ngasekunene livula njengedrowa. Ukusuka phezulu ngokulandelelana iqhosha:
Isantya sokuskrola - cofa kwaye utsale ukuseta isantya sokushukuma okungagqibekanga kwentetho kwiMowudi ebukhoma.
Ubungakanani befonti - tsala ukuseta ubungakanani befonti.
BG-khetha umbala ongasemva.
GM - igrama. Yenza iinxalenye zentetho zibonakale.
Thepha nganye ukuze uzizame. Cofa ukuvula, Cofa ukuvala.
Amacandelo entetho ayimfundo kwaye apholile, nceda uqiniseke ukuzama loo manqaku. Ilungile kubafundi.
Okokugqibela iintolo eziphezulu nasezantsi zizokuvumela ukuba ucofe kwaye utsale ezo zixhobo phezulu nasezantsi kwiphepha ukuze uhlengahlengise indlela othanda ngayo.
Cofa iqhosha lokungenisa. Cofa kwiDropbox kunye / okanye kuGoogle Amaxwebhu ukuseta iziqinisekiso zakho.
Ngaphakathi kweDropbox oku kwenza ifolda kwi:
Ungangenisa kwaye uthumele ngaphandle iifayile kule folda. Tsala isicatshulwa sakho, iPDF, i-RTF okanye iifayile ze-HTML kule folda.
Emva koko yiya kwakhona kwiphaneli engezantsi kwakhona ucofe ibhokisi ephantsi kwaye ukhethe iifayile ofuna ukuzingenisa.
Ngenisa ngeGoogle Drayivu
Nje ukuba ungene kuwo udwelise zonke .rtf, .pdf, .htm / html kunye .txt fayile kwi google drive folders / amafolda angaphantsi. Khetha iifayile ofuna ukuzingenisa.
Khetha intetho emva koko ucofe iqhosha lokuThumela ngaphandle ukuze wabelane ngentetho nge-imeyile ye-HTML.
Chukumisa icala lasekunene ukukhawulezisa i-autoscroll. Jonga le icon.
Chukumisa icala lasekhohlo ukucothisa i-autoscroll. Jonga le icon.
Chukumisa kabini indawo yeziko ukuze ume okanye uye.
Cinezela intetho phezulu okanye ezantsi ukuhambisa olo lwalathiso ngokukhawuleza.
Phina ukunciphisa ubungakanani befonti.
Yandisa ubukhulu befonti.
Kwibhodi yokuqhawula eneBlue
Izitshixo eziphezulu / ezantsi zokuphrinta isebenza ngelixa uhlela intetho.
Skrolela iskripthi ungakuvumeli sikrobe-Funda ngokwendalo. Lungisa i-autoscroll kwisantya sakho sokufunda.
Hambisa, uphefumle kwaye uphumle kwaye uyonwabele ukuthetha nabantu.
Ziqhelanise nentetho yakho.
Passion kunye neemvakalelo zilungile. Amandla la ayondla intetho yakho.
Ukuma kubalulekile. Yima nkqo.
Beka iikhothi kwisikripthi sakho ukuze uphefumle, khomba, phumla, nantoni na ofuna ukuzikhumbuza ngayo xa unika intetho.
Q: Ii-teleprompters zixabisa i-750 yeedola nangaphezulu. Ngaba ikhona indlela yexabiso eliphantsi yokusebenzisa i-SpeechMaker njengefowuni?
A: Umbuzo ogqwesileyo! Kwabo abangayazi i-teleprompter okanye i-cue sisixhobo esisetyenziswa kwistudiyo sikamabonwakude esivumela umntu ukuba ajonge ngqo kwikhamera kwaye afunde isicatshulwa esikrwada esikrinini. Yile nto uyibonayo ukuba umongameli uyayisebenzisa ukuze akwazi ukuyikhumbula intetho yakhe kunye nokugcina unxibelelwano ngamehlo kunye nabaphulaphuli ngaphandle kokujonga phantsi amakhadi e-cue. Ukusebenzisa i-teleprompter kunokwenza ukuba i-podcast yakho, imveliso okanye enye ividiyo ibonakale ilunge ngakumbi. Ngoku, nabani na unokuthenga i-teleprompter okanye ayenze ngokwakho ukusetyenziswa kunye ne-smartphone okanye ithebhulethi yakho. Cofa apha Kwenye uninzi lwenze ngokwakho (i-DIY) iividiyo xa uzenzela ngokwakho umnxeba wefowuni.
Q: Ngaba unazo naziphi na iingcebiso zokucutha ukunyakaza kwamehlo xa usebenzisa i-teleprompter?
A: Ewe konke malunga nomgama ukusuka emehlweni omfundi ukuya kwikhamera. Umkhulu umgama kukuhamba kwamehlo okuncinci. Umkhulu umgama omkhulu kwiscreen kunye nefonti ekufuneka ubuyile. Sebenzisa udidi olukhulu.
QNdiyabona ukuba iaudiyo igcinwa kwi .caf eyifomathi yefayile yesandi. Ndiyidlulisa njani kwaye ndiyidlale le yam kwikhompyuter ye-Mac / Win?
A: Kuthethwa malunga apha:
Kwakhona yiya kuGoogle caf ukuya ku-mp3 okanye i-mp3 ukuya kwi-caf okanye nantoni na ukufumana isixhobo simahla sokwenza uguquko.
Ukuba unesiphakamiso okanye ingxaki sifuna ukuva kuwe. Qhagamshelana nathi
Enkosi ngokusebenzisa i-SpeechMaker
Ilungelo lokushicilela © 2010 - 2017 Plum Amazing, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe. Umgaqo-nkqubo wabucala / Ezomthetho. I-EULA yazo zonke iisoftware ilapha.
Iintetho ezili-11 ezidumileyo ngabafazi kwezobunjineli kunye netekhnoloji
Iintetho ezi-7 ezingalibalekiyo ngo-2015
IiNtetho eziSithathu eziPhezulu zikaSteve
Iintetho ezingama-25 eziguqula umhlaba
Iintetho ezingama-55 zaBantu abanempembelelo kwiinkulungwane ezingama-21
Iintetho ezili-10 eziPhambili zeTekhnoloji yokuqalisa